မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 11/01/2007 - 12/01/2007
ခုတလော ကျမဖုန်းကို ဘယ်သူမှန်းမသိ.. msg ပို့ ပို့နေတယ်.. English ကလဲ ညံ့လိုက်တာလွန်ရော.. ဘယ်သူလဲ.. ဘာကိစ္စလဲမေးတော့လဲခင်ချင်လို့ဆိုလား..
ကျမက msg မပြန်ရင်လဲ သူကပို့တာပဲ.. တခါတလေ ဖုန်းတောင်ခေါ်လိုက်သေးတယ်.. ကျမ ကိုင်ရင်ပြန်ချသွားရော.. တော်တော် အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်..
တခါကဆို အိပ်နေပြီ ဖုန်းမြည်တော့ ကမန်းကတန်း ထပြီးဖြေတော့ ပြန်ချသွားတယ်.. ဟိုနေ့ကလည်း ကျမအလုပ်ထဲမှာ ဖုန်းလာလို့ အမြန် ခက်ခက်ခဲခဲ ထုတ်ပြီးကိုင်ရပါတယ်.. (ကျမအလုပ်က clean room ဖြစ်၍ အပေါ်မှထပ်ဝတ်ထားသော uniform ကို ကျော်ပြီး ဖုန်းကိုယူရတာ မလွယ်လှပါ).. ဒါပေမဲ့ ကိုင်လိုက်တော့ ချသွားပြန်ပါတယ်.. စဉ်းစားကြည့်ပါ ဘယ်လောက် ဒေါသထွက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ..
အဲဒါ ကို အောက်တန်းကျတယ်လို့ကို ပြောလို့ရပါတယ်.. အဆင့်မရှိ.. လူလိုနားမလည်... !@#$%^&
ကျမ အမြင်မှာတော့ မိန်းကလေးတယောက်ကို ဒီလိုနည်းနဲ့ ချဉ်းကပ်တာ အလွန်တရာမှ အဆင့်အတန်းနိမ့်ပြီး.. idea ညံ့လွန်းပါတယ်.. မိန်းကလေးကကြည်ဖြူတယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး... ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ ရင်ခုန်ချင်ခုန်မှာပေါ့.. ဒါပေမဲ့ ကျမ ဆယ်ကျော်သက်ဆိုလဲ ကျမကတော့ ဒီလိုနည်းကို personally ကိုမကြိုက်တာပါ.. ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ လူတယောက်ကိုလက်ခံစကားပြောတယ်ဆိုတာ အလွန်တရာမှ အန္တရာယ်များပါတယ်.. သိတ်ခါလဲကျတယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. အဲဒီမိန်းကလေးကို တဖက်လူကတန်ဖိုးမထားတာသေချာပါတယ်.. သူတကယ်စိတ်ဝင်စားရင် မိန်းကလေးကိုသူငယ်ချင်းမှဖြစ်စေ.. ဒါမှမဟုတ် တခြားနည်းနဲ့ဖြစ်စေ..မိန်းကလေး ကို ဂရုစိုက်ရင် ဂရုစိုက်သလိုအဆင့်အတန်းရှိတဲ့တခြားနည်းတွေတွေ့မှာပါ.. ဘယ်သူလဲ အသိမခံချင်ရင်လဲ.. အဲဒိမိန်းကလေးကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်တဲ့နည်းကို သုံးသင့်ပါတယ်.. အဲလိုမျိုးဆိုရင်လဲ ကိုယ်စိတ်ထင်ရာနည်းကို ရှောက်မသုံးပဲ.. အဲဒီမိန်းကလေး သဘောကျလောက်တဲ့နည်းကို စဉ်းစားပြီး သုံးသင့်ပါတယ်.. ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူပဲ.. မိန်းကလေးရဲ့ like and dislike တွေကို တော့ သိသင့်တာပေါ့.. ဒါမှလဲ မိန်းကလေးက ထိုသူရဲ့ sincerity ကိုခံစားလို့ရမှာပါ..
အဲဒါကြောင့် အပေါ်က ပြောခဲ့သလိုမျိုး အောက်တန်းကျတဲ့နည်းနဲ့ချဉ်းကပ်ရင် လက်ခံစကားမပြောဖို့ မိန်းကလေးတွေကို တိုက်တွန်းပါတယ်.. ယောက်ကျားလေးတွေအနေနဲ့လဲ ကိုယ်တကယ်ချစ်တယ် တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် ခင်မင်မှုကို နည်းမှန်လမ်းမှန် လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန် နည်းလမ်းကိုသုံးပြီး ချဉ်းကပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်.. ကိုယ့်ရဲ့ impression ဟာ ကိုယ်သုံးတဲ့ first step ပေါ်မူတည်ပါတယ်.. first impression မှာ minus ပြခံရ ရင် အဲဒီမိန်းကလေးကို မရဖို့ ၈၀% သေချာနေပြီသာမှတ်လိုက်ပါတော့....
ခုလောလောဆယ်တော့ ကျမရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ မသိသေးပါဘူး.. ဟိုနေ့ ကတော့ အဲဒိ အဆင့်မရှိတဲ့ လူကိုဖုန်းခေါ်ပြီး ဒါမျိုးဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ပြီးအရေးယူမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုတကယ်လုပ်လို့ ရမရမသိပါဘူး.. သိရင် နည်းလမ်းလေးများပေးကြပါ.... ကျေးဇူးဆပ်ပါမည်.....
Posted by mabaydar at 8:22 PM 10 comments :
မတွေးမိခဲ့ ဖူး ...
တမ်းတရမရ့် ဒုက္ခကိုလေ .......
နှစ်ဦးသားကြေကွဲကြရုံကလွဲပြီး အခြားရွေးချယ်စရာ ... လမ်းတစ်ခု ... ဘ၀ဆက်တိုင်းအတွက် ...
ဖန်ဆင်းပေးပါ ... ကံကြမ္မာရယ် ...
Posted by mabaydar at 4:21 PM2comments :
Posted by mabaydar at 11:22 AM 1 comment :
ခုခေတ်အတွဲတွေတော်တော်များများကိုကြည့်ရင်.. မိန်းကလေးက ယောင်္ကျားလေးထက်ပိုချောကြပါတယ် (no offend to guys).. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ နည်းပညာတိုးတက်လာရုံတင်မကဘူး အလှပြင်ပစ္စည်းများနဲ့ အလှကုန်များဟာလဲ ကျမတို့မိန်းကလေးများပင် မနည်းအမှီလိုက်နေရပါသည်..
အလှကုန်ဆိုရာ၌ make up တစ်ခုတည်းဟု တွေးထင်မိကောင်းတွေးမိမည်.. "ငါကတော့ make up မသုံးပေါင်းသနပ်ခါးပဲလိမ်းတာ" ဟုဂုဏ်ယူတတ်သူများလည်းရှိသလို.. "ငါ့ကောင်မလေးက ရိုးတယ်အေးတယ် အလှကုန်မသုံးပဲကို natural beauty လေး"ဟုဂုဏ်ယူ၍ကြွားတတ်သော ယောကျာင်္းလေးများကိုလဲ တွေ့ဖူးပါသည်..
မည်သို့ပင်ဆိုစေ.. အလှအပမကြိုက်ဟု ပြောသောသူသည် အနည်းနှင့်အများ မသိစိတ်ကပင်ဖြစ်စေ သိစိတ်ကပင်ဖြစ်စေ လိမ်နေသည်ဟု ကျမခံစားမိသည်.. ယနေ့ခေတ်မြို့ပြလူတန်းစားထဲတွင် အလှကုန်ပစ္စည်းဖြင့်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေနိုင်သူ မရှိ.. make up မသုံးသူများ အနည်းဆုံး shampoo တော့သုံးမည်.. conditioner တော့သုံးမည်.. shower cream တော့သုံးမည်.. facial fome or face wash တော့သုံးမည်.. ဤကဲ့သို့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို အုပ်စုခွဲလျှင် အလှကုန်ဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရှိလိမ့်မည်ဟု ကျမယုံကြည်သည်..
ယနေ့ခေတ်တွင် direct make up(foundation,cream purf, eye shadow,mascara,eye liner,etc..)ထက်.. indirect အလှကုန်များ natural beauty ဟုထင်ရအောင် ပြင်သောပစ္စည်းများနှင့်နည်းများမျိုးစုံရှိပါသည်.. face mask, lotion,whitening cream, toner, eye dark circle remover(မည်သို့ခေါ်သည်သေချာမသိပါ), winkle remover(မည်သို့ခေါ်သည်သေချာမသိပါ),ရေမွှေး,hair gelအမျိုးမျိုး စသည်ဖြင့် လိုက်မမှီနိုင်လောက်အောင် အမျိုးစုံလှပါသည်..
ဒါတင်မပြီးသေး ၄င်းပစ္စည်းများကိုလိမ်းချယ်ရာ၌ အသုံးပြုရသော ကိရိယာ များကရှိသေးသည်.. mascara တင်ပြီး မျက်တောင်ပိုကော့်စေရန် မျက်တောင်ညှပ်သည့်ကိရိယာရှိသည်.. cream purf အတွက် purf လိုသည်.. တချို့သောခဲတံ နှုတ်ခမ်းနီများအတွက် ချွန်စက်လိုသည်.. ပါးနီ,eye shawdow လိမ်းရန် brush လိုသည်.. မျက်ခုံးမွှေးနှုတ်ရန် ဇာဂနာ or blade ဓားလိုသည်..
ဟင်း ရှုတ်လိုကသည့်ဖြစ်ခြင်း.. ဒါတောင်ကျမ မသိတာအများကြီးကျန်သေးသည်..
ပြောရမည်ဆိုလျှင်.. ယောကျာင်္းများပင် အလှကုန်ဖြင့် မကင်းပေ.. တချို့သောပစ္စည်းများ၌ For men ဟူ၍ပင်သီးသန့်ရှိသေးသည်..
မနေ့က Singapore Expo မှာပြုလုပ်တဲ့ Loreal sale သွားပြီးထဲက ဤကဲ့သို့ အလှကုန်နှင့်ပတ်သတ်၍ ရောက်တက်ရာရာ အတွေးစများဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်..၁နှစ်၁ခါ ဒီအချိန်လောက်ရောက်လျှင် ပြုလုပ်တတ်သော Loreal warehouse sale ကို မိန်းကလေးများတင်မက ယောကျာင်္းလေးများပင် စောင့်စားမြဲဖြစ်သည်..
မနေ့က ကျမရောက်သွားသည့်အချိန်တွင် လာဝယ်သူတွေ ပျားပန်းခတ်များလွန်းလှသည်.. အရင်ဆုံးကျမအတွက်လိုအပ်သော lipstick counter ကိုလိုက်ရှာမိသည်.. မတွေ့...
"lipstick သွားဝယ်မယ်ဟေ့" လို့ပြောလိုက်တဲ့မြန်မာ မိန်းကလေး၁ယောက်အသံနဲ့အတူ သူလက်ညှိုးထိုးလိုက်တဲ့နေရာကို ကျမကမန်းကတန်းလိုက်ကြည့်မိသည်.. "အားပါးပါး..." ကျမပါးစပ်မှရေရွတ်မိသည်.. (စင်ကာပူ စကားဖြင့်ဆိုရသော်.. wa lao way).. counter ကိုမမြင်ရ လုရက်တိုးနေကြသောမိန်းကလေးများသာ...
ဒါနဲ့ပဲ counter နားရောက်နေတဲ့ မြန်မာမလေး၁ယောက် တွေ့တာနဲ့.. လက်ထဲပါတဲ့အရောင်မတူတာယူပေးပါဆိုပြီး အကူညီတောင်းခဲ့ရတယ်..
လူတိုးတာလဲမပြောနဲ့ အပြင်ဈေး ၁၃ကျပ်လောက်ရှိတဲ့ lipstick ကအဲဒိမှာ ၅ချောင်း ၂၀ တဲ့ရှင်.. ရန်ကုန်ဈေးထက်ပင်သက်သာသည်.. qualityစိတ်ပူစရာမလို.. ဒါတောင်လူသဘော လူ့သဘာဝအတိုင်း အားလုံးတူတူကိုပင် ကောင်းတာလေးမှ လှတာလေးမှဟု ရွေးမဆုံးသော မမ များကရှိသေးသည်.. တချို့ကလည်း ကိုယ်သုံးဖို့အတွက်တင်မက လက်ဆောင်ပေးဖို့ပါဝယ်ကြသည်.. မိန်းမများ၏ လူတောတိုးမှူကို ဤနေရာတွင် ယောင်္ကျားများ လက်မှိုင်ချရလောက်သည်
မိန်းကလေး အလှကုန်ဟူ၍ ယောကျာင်္းလေးများနှင့်မဆိုင်ဟု မထင်နှင့်.. ပစ္စည်းတပွေ့တပိုက်ဖြင့်ဝယ်သွားသော ယောကျာင်္းလေးများလည်း တွေ့မိသည်.. honey, baby, sweety, aunty, မေမေ, မမ တို့အတွက် လက်ဆောင်ကောင်းလေ..
ဒီတော့ စကာပူမှာရှိတဲ့ ဗေဒါ့ စာဖတ်သူတွေ မဝယ်လိုက်ရမရှိရလေအောင် ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်တယ်နော်...
Promotion Period : 23,24,25 of Nov 07
Place : Expo
Time : Until 9pm
Posted by mabaydar at 12:01 PM2comments :
ဒီလိုနဲ့ ကျမတို့ ၅ယောက်ဟာကျောင်းမှာ အတွဲဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.. သူတို့နဲ့ကျမ သူငယ်ချင်းသာဖြစ်တာ.. ကျမနဲ့သူတို့ကလုံးဝ type မတူဘူး.. သူတို့လေးယောက်က စာအရမ်းလုပ်တယ်.. အတန်းထဲမှာ ၁ to ၁၀ အမြဲရတယ်... ကျမကတော့ အမြဲ 10 to 20 ပေါ့.. ၁ခန်းမှာ ၈၅ယောက်ရှိတယ်လေ.. ကျမကတော့အလည်အလတ်ပဲပေါ့.. သူတို့ကစကားလဲ သိပ်မများဘူး.. ကျမကစကား အရမ်းများတာ.. စကားပြောရင် အသံကကျယ်သေးတယ်... ကျမအိမ်ကလူတွေကတောင် သူတို့နဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းဖြစ်တာ အံ့သြကြတယ်..
ကျမကတော့ မအံ့သြပေါင်.. သူတို့ကစကားမများတော့ ကျမ၁ယောက်ထဲပြောရတာပေါ့.. ထမင်းစားချိန်ဆိုရင်.. ကျမကစားရင်းပြော သူတို့ကနားထောင်.. ဟုတ်နေတာပဲ.. ဒါပေမဲ့ စားလို့ပြီသွားရင် သူတို့က စာအုပ်ထုတ်ပြီး စာကျက်ကြရော.. ကျမကစောစောက စကားများနေတော့ ထမင်းမကုန်သေးဘူးပေါ့..
အဲဒိအခါကျရင်.. တခြားအုပ်စုတွေဆီသွားပြီး.. စကားများတယ်.. ရီစရာတွေပြောတာပေါ့.. ကျမက ထမင်းစားလဲ ကြီးတော့ အိမ်ကထည့်ပေးတာနဲ့မလောက်ဘူး.. (ပြောရတာတော့ ရှက်ပါတယ်).. ဒီတော့ အတန်းထဲက ထမင်းမကုန်တဲ့ slim body များရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ပေါ့.. ထမင်းစားချိန်ဆို.. ဟိုလူက ထမင်းပေးချင်လို့ခေါ်.. ဒီလူကခေါ်ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ ကျမလိုချင်တာက.. တခြားသူငယ်ချင်း အုပ်စုတွေလို.. စုစားကြ.. ဟင်းတွေလဲ စားကြ.. အဲလိုနေချင်တာ.. သူတို့ဟင်းတွေတော့ ကျွေးပါတယ်.. ကျမဟင်းကျတော့ မစားဘူး..ကြာတော့သူတို့ဟင်းစားရတာအားနာလာတယ်.. စားချင်လို့မဟုတ်ဘူး..ပျော်ချင်လို့... တခြားအုပ်စုတွေကို သိပ်အားကျတာပဲ....မုန့်ဈေးတန်းဆိုလဲ.. သူတို့ဝယ်စရာရှိမှသွားတယ်.. ကျမကသွားချင်ရင်.. ကျုံတဲ့အုပ်စုနဲ့ပဲလိုက်တယ်.. သူများအုပ်စုနဲ့သွားရတာလည်း သိပ်တော့မကောင်းပါဘူး.. သူတို့ ဘယ်သူအကြောင်းပြောလို့ပြောမှန်မသိ.. ဒီလိုပဲ လိုက်ညှိနေရတယ်..
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ.. ကျမအခင်ဆုံးက snow ပေါ့.. သူက ကျမနဲ့ ကျောင်းကားလည်းတူတယ်.. သူမောင်လေးနဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်.. ကျမအစ်မတွေနဲ့လည်းသိတယ်.. ညနေကျောင်းဆင်းရင် တူတူပြန်ရတယ်.. ကျောင်းကားပေါ်မှာ ပျော်ရတယ်.. သူက ကျမနဲ့ ၂ယောက်ထဲရှိရင်.. ပေါင်းလို့ပိုကောင်းတယ်.. စကားလည်းပိုပြောတယ်.. နေခြည် တို့နဲ့တွေ့ရင် စာပဲကျက်နေရော.. ကျမခေါ်လည်းမလိုက်တော့ဘူး.. အများသဘောပဲ..
မှတ်မှတ်ရရ.. ကျောင်းကားပေါ်မှာ ကျမနဲ့ စကားတွေပြောနေတာကို သူ့အစ်ကိုက မကျေနပ်လို့ တရက်.. ကျမကို.. " နင်နဲ့ပေါင်းမှပဲ ငါ့ညီမစကားများတော့တယ် " ဆိုပြီးလက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြောတာခံလိုက်ရသေးတယ်.. အဲဒါကို ကျမအစ်မကမကျေနပ်လို့ သူတို့လူကြီး၂ယောက်ရန်ဖြစ်ကြတာ.. သူအစ်ကို assembly မှာ အရိုက်ခံရတဲ့ အထိပဲ.. ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ ၂ယောက်ရဲ့ အခင်အမင်က မပျက်ခဲ့ပါဘူး..
ဒါပေမဲ့ အတန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှ သူနဲ့နေခြည်နဲ့ကပိုတွဲလာတယ်.. စာတူတူကျက်တာကိုး.. သူငယ်ချင်း ၁အုပ်စုထဲမှာ.. အချင်းချင်းခင်ကြတာကိုအပြစ်မပြောပါဘူး.. ဒါပေမဲ့.. ဘက်လိုက်သလိုဖြစ်လာတာတော့ကျမ မကြိုက်ဘူး..အဲဒါကျတော့ သဉ္ဖာနဲ့ကျမကအမြင်သွားတူတယ်..ကျမမှာသူအဖော်ရှိသေးလို့တော်သေးတာပေါ့.. ဒါပေမဲ့ ၈တန်းရောက်တော့ သဉ္ဖာက Chicago ကို မိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားတယ်..ငယ်သေးတော့လိပ်စာတောင်းထားကောင်းမှန်းမသိလိုက်ဘူး.. ကျမတို့ ၄ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာပေါ့..
ကျမနဲ့သူတို့လုံးဝမတူတဲ့အချက်ကတော့..စာမေးပွဲအမှတ်ရရင်.. တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ကြတာပဲ... အမှတ်များတဲ့သူဆိုရင် "နင်ကလျှိုထားတယ်.."ဘာညာနဲ့.. ပြောလို့မဆုံးတော့ဘူး.. အမှန်တော့ အမှတ်များတဲ့သူကို မသိစိတ်ကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ထင်ပါ့.. ကျမသူတို့ထက်တခါတလေများ.. များသွားရင်ပိုဆိုးပေါ့...
ကျမကတော့ ကိုယ်ကြိုးစားသလောက် ကိုယ်ရတာကို ကျေနပ်လိုက်တယ်.. ပြန်မှပြင်လို့မရတော့တာ.. နောက်တခါ ဒိထက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်..
သူတို့နဲ့ပေါင်းရလို့ သွယ်ဝိုက်ပြီးရတဲ့ အကျိုးမြတ်တခုတော့ရှိတယ်.. ဘာလဲဆိုတော့.. အတန်းထဲကလူတွေက.. ကျမတို့ကိုစာတော်တဲ့အုတ်စုပေါ့.. အထင်ကြီးကြတယ်.. တချို့ယောကျား လေးတွေထဲမှာ စာတော်တဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ပဲ စကားပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်.. ကျမကအတန်းထဲမှာ လူတိုင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်.. ညံ့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် တော်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် တတန်းလုံးနဲ့ခင်တယ်..
ဒါပေမဲ့ ကျမကိုအကြီးအကျယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်စေတဲ့နေ့.. သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုသိလိုက်တဲ့နေ့.. တနေ့ရောက်လာခဲ့တယ်...
Posted by mabaydar at 12:42 AM2comments :
VIP လိုင်း ပဲပေါ့ ..........
Posted by mabaydar at 4:44 PM3comments :
ခြေထောက်နဲ့........
Posted by mabaydar at 4:40 PM2comments :
နင်က ... နေမင်းဆိုရင် ငါ့တစ်ယောက်ထဲကိုပဲလင်းပေးပါ ...
လမင်းဆိုရင်လဲ ငါ့တစ်ယောက်ထဲရဲ့ အမှောင်ကိုခွင်းပေးပါ ...
မိုးဆိုရင်လဲ ငါ့တစ်ယောက်ထဲကိုပဲစိုပါ ...
ဆောင်းဆိုရင်လဲငါ့တစ်ယောက်ထဲ အေးမြပါ ...
အတ္တတွေ အန္တနဲ့ ပြောလိုက်မယ် ...
Posted by mabaydar at 4:02 PM3comments :
Posted by mabaydar at 8:26 AM 8 comments :
ဒီနေ့.. ဘာရယ်မဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်တယ်.. Beowulf ဆိုလားပဲ.. poster မှာ အကောင်လိုလို.. သရဲလိုလိုနဲ့..
ရောမခေတ်ကပုံမျိုးဆိုတော့ ကောင်းမလားဆိုပြီးရွေးလိုက်တာ .. ဇာတ်လမ်းကတော့ကောင်းပါတယ်.. မစိုးပါဘူး.. ဒါပေမယ့် သရုပ်ဆောင်တွေက
လူမဟုတ်ဘူုး .. graphic animation တွေ .. လူတွေနဲ့ ပိုကြည့်ချင်တာ .. ဒါပေမယ့် လူနဲ့တော့ တော်တော်တူပါတယ်.. ကြည့်ရင်းနဲ့တောင်..
လူမဟုတ်တာမေ့သွားတယ်.. အော်.. ဒါပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး.... ပြောချင်တာက ..
မြန်မာပြည်နယ်စပ်မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ "ရမ်ဘို ၄" အကြောင်း....
ဒီနေ့ ရုပ်ရှင်မပြခင်ကြော်ငြာတွေ့လိုက်လို့ .. မြန်မာစစ်သားတွေမတရားနှိပ်စပ်မှု.. မိန်းမသားတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်မှူတွေလဲပါတယ်ထင်တယ်။..
အန္တရာယ်များစွာနဲ့ခက်ခဲတဲ့ပွဲတွေကိုနွှဲလာပြီးတဲ့နောက် ရမ်ဘို ဟာ.. ယိုးဒယားမှာသီးသန့်ဘ၀ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေနေခဲ့ပါတယ်.. ဘန်ကောက်မှာနေပြီး သဘောင်္ပျက်တွေကိုပြင်တဲ့အလုပနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုပျက်သနာများနဲ့ ရှောင်နေခဲ့သော်လည်း.. ပျက်သနာက သူ့ဆီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်..
NGO အဖွဲ့သားတချို့ နယ်စပ်မှာ မြန်မာစစ်သားများရဲ့ အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်.. ဒါတင်မက ကရင်လူမျိုးတချို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာလဲ စစ်တပ်ရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကို ခံနေရပါတယ်.. သူတို့ကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ရမ်ဘိုကို အကူညီလာတောင်းကြတာပါ...
ဤဇာတ်လမ်းကို .. အစက "JohnRambo" လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပေမဲ့.. ထုတ်လုပ်သူများမှ ပရိတ်သတ် attention ပိုရစေရန် "Rambo 4: To Hell and Back" လို့ အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အဲဒါ စလုံးမှာ ဇန်န၀ါရီ ၂၅ရက်နေ့ ရုံတင်ပြသမည်ဖြစ်ပါတယ်လို့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်..
Posted by mabaydar at 9:53 PM No comments :
I really want to writeagood blog. Sometime i got things to write in my mind and when i open and try to write don't know how to start. It is really irritating.
Whenver I go visit to other pple blog. I enjoy reading their blog. Some are really good at imagination and writing. Some are really creative. The huge things making me to lazy to write blog is lazy to type in myanmar font. I want to write with myanmar font. But lazy to type it and no time to write all the things in my mind. The reason is too bad huh.. Now i understand that writing blog is alsoadifficult things. I really appreciate people who can update their blog everyday.
Now i just write This and that coz i am so free at work today. But yet need to act busy with computer.
Oh.. but i think to day isabad day for me. Morning wake up late and when i go to bus stop, I met with one indian guy who argue with me last time again. It makes my mood bad. And i nearly over sleep on the bus. I woke up when the bus is almost leaving the bus stop. So I faster get up and try to tap my bus card. I couldn't find the card yet my hand ph drop from my bag. :(
The bus driver is really un-understanding person. He should have known i am trying to get off the bus but yet he close the door. I am really embrass to tell him to open the door. I guess everyone in the bus are looking at me since i am the very front of the bus.
Reach to work, my trainer come and warn me for the little mistake. If i haveamind like last time, I sure talk back. But now i think i am alittle mature. I just said "okay". but it's really irriatated. She come and tell me whenver i makealittle mistake. But i didn't do the same mistake again and again. I just do the mistake that i never do before. But she will told me like " u always do like that". There can't be excuse or explanation. If u do have, U will get one enemy. ok ok.. i better stop it now. coz she is behind me..
Posted by mabaydar at 6:39 PM No comments :
Yay!!.. finally i can make it to get myanmar font and whatever i write with myanmar font can be seen in any computer.
All thank to Nyi lynn seck's blog...
I found some useful blog regarding with creating myanmar blog through nyi lynn seck's blog..
I found his blog through linletkyalsin's blog.. thank as well to her...
Even though they might now know I thank them.. i am still glad to say thank to them..
That's why this blog is just like my secret.. I wish they can see my blog and know that i thank them without i telling them..
But currently i am at work and my work pc have no zawgyi font.. :( .. too bad..
Posted by mabaydar at 9:52 AM No comments :